शेखरको प्रश्न शेरबहादुरलाई : यो पटक हँसिया हथौडालाई भोट, अर्को चोटि के मा ? – Vision Khabar
शेखरको प्रश्न शेरबहादुरलाई : यो पटक हँसिया हथौडालाई भोट, अर्को चोटि के मा ?
। १२ चैत्र २०७४, सोमबार २०:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि प्रश्नको बर्षा गरेका छन् । सोमबार पार्टी मूख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा कोइरालाले देउवाकै कारण पार्टी इतिहासमै सबैभन्दा कम्जोर अवस्थामा पुगेको आरोप पनि लगाए ।
‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मैले सभापतिज्यूलाई भनेको थिएँ-पार्टी त कब्जा गर्नुभयो तर देश कम्युनिष्टले कब्जा गर्छ । हो आज हामी त्यही बिन्दुमा आइपुगेका छौँ’, लिखित धारणा राख्दै कोइरालाले भने, ‘पार्टी सभापतिज्यू कांग्रेसले सबै क्रान्तिहरुको नेतृत्व गर्यो, सबै प्रकारका निरकुंशतालाई परास्त गर्यो, गणतन्त्र ल्यायो, संविधान जारी गर्यो, २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन र्यो तर पनि आज आफैँ इतिहासमै कमजोर भएको छ यसको कारण खोजिन जरुरी छ ।’
चितवनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्री रेणुलाई जिताउन कांग्रेस कार्यकर्तालाई हँसिया हथौडामा भोट हाल्न लाउनु देशभरकै चुनावी परिणामका लागि घातकसिद्ध भएको पनि कोइरालाको निचोड थियो ।
‘पार्टी सभापतिज्यू सायद स्थानीय निर्वाचनपछि चितवन जानुभएको छैन होला । यदि गए पनि कार्यकर्तालाई भेट्नुभएको छैन होला । महामन्त्रीजी धेरै पटक जानुभयो, तर कार्याकर्तासँग राम्ररी संवाद भएको छैन होला । चितवनका कार्याकर्ताले हामीलाई सोध्न थालेका छन् अब आउने निर्वाचनमा हामीले के मा भोट हाल्ने ? सभापतिजी हामीले कार्यकतालाई के जवाफ दिने ?, कोइरालाले प्रश्न गरेका छन्, ‘जुन पार्टीभित्र आजसम्म पनि कम्युनिष्टसँगको सहकार्यको परिणामले देश र जनतालाई हित गर्यो कि गरेन भन्ने बहस छ । त्यही पार्टीको सभापतिले माओवादीको आमसभामा गएर हँसिया हथौडामा भोट माग्दा अन्य ठाउँमा माओवादीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कांग्रेसका उम्मेद्वारको मनोबल कहाँ पुग्यो होला ?
नेपाली कांग्रेसले देशका सबै परिवर्तनमा निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै कोइरालाले अहिले कांग्रेस इतिहासमै कमजोर हुनुको कारण खोजिनुपर्ने माग गरे । ‘केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा कांगेसको न्युन उपस्थिति छ । अझ भन्नुपर्दा सबै ठाउँमा हामीले प्रतिपक्षको हैसियत पनि गुमाएका छौ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा समानुपातिक र पपुलर भोटको आधारमा हामी हारेका छैनौँ भन्नु लज्जास्पद हो । नेतृत्वले हार स्वीकार्न सक्नुपर्छ । तब मात्र सुधार सम्भव छ ।’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको मन्तब्यको सम्पादित अंश
पदाधिकारी एवम् सदस्य साथीहरु ।
सर्वप्रथम्, स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त कमजोर भएर दिल्लीस्थित एपोलो हस्पिटलमा उपचार गराइरहनूभएका केन्द्रीय सदस्य खूमबहादुर खड्काको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । उपचारका निम्ति उहाँलाई आर्थिक समस्या परेकाले सहयोगका निम्ति पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँदछू। पार्टी र लोकतन्त्रका निम्ति आफ्नो सम्पुर्ण जीवन बिताउनुभएका खड्काकोबारेमा पार्टी बेखबर हुनु दुर्भाग्य हो ।
संबिधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानलाई नै च्यालेन्ज गर्ने गरी यूरोपियन यूनियनले गम्भीर र आपत्तिजनक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नेपाललाई जातीय द्वन्द्वमा लैजान लागेको छ । यसले कतै नेपाल अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान त बन्दै छैन भनेर हामीलाई झस्काएको छ ।
१. प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मैले सभापतिज्यूलाई भनेको थिएँ ‍- पार्टी त कब्जा गर्नुभयो तर देश कम्युनिष्टले कब्जा गर्छ । हो आज हामी त्यही बिन्दुमा आइपुगेका छौं ।
२. पार्टी सभापतिज्यू सायद स्थानीय निर्वाचनपछि चितवन जानुभएको छैन होला । यदि गएको भएपनि कार्यकर्तालाई भेट्नुभएको छैन होला । महामन्त्रीजी धेरै पटक जानुभयो, तर कार्याकर्तासँग राम्ररी संवाद भएको छैन होला । चितवनका कार्याकर्ताले हामीलाई सोध्न थालेका छन् – अब आउने निर्वाचनमा हामीले के मा भोट हाल्ने ? सभापतिजी हामीले कार्यकतालाई के जवाफ दिने ?
३. जुन पार्टीभित्र आजसम्म पनि कम्युनिष्टहरुसँगको सहकार्यको परिणामले देश र जनतालाई हित गर्यो कि गरेन भन्ने बहस छ । त्यही पार्टीको केन्द्रीय सभापतिले माओवादीको आमसभामा गएर हसिँया हथौडामा भोट माग्दा अन्य ठाउँमा माओवादीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कांग्रेसका उम्मेद्वारहरुको मनोबल कहाँ पुग्यो होला ?
४. नेपाली कांग्रेस, जुन पार्टीले सबै क्रान्तिहरुको नेतृत्व गर्यो, जसले सबै प्रकारका निरकुंशतालाई परास्त गर्यो, गणतन्त्र ल्यायो, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यो, २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो तर पनि आज नेपाली काग्रेंस इतिहासमै कमजोर भएको छ यसको कारण खोजिन जरुरी छ ।
२. माओवादी हाम्रो सत्ता साझेदार थियो । गठबन्धन छाड्दै छ भन्ने कुराको अनुमान सभापतिजीलाई किन भएन रु तरपनि सभापतिजीले माओवादीप्रति किन पुरै भरोसा गर्नुभयो ?
३. जहाँसम्म लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुरा छ, किन र कसका लागि थियो लोकतान्त्रिक गठबन्धन ? अमुख व्यक्तिहरुलाई जिताउँन ? कि कांग्रेसी कार्याकर्ताहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम त भएको होइन रु लोकतान्त्रिक गठबन्धन केवल मधेसी मोर्चाका लागी मात्रै थियो । निर्वाचन लगतै मधेसी मोर्चाकै २ जना व्यक्तिलाई किन प्रदेश प्रमुख बनाउन पर्यो रु नेपाली कांग्रेसमा मधेसी समुदायभित्र योग्य मान्छे थिएनन् रु मधेसी समुदायलाई पार्टीबाट किन टाढा पार्न खोजिदैंछ । मधेस काग्रेंसको उर्वर भूमि हो किन यसलाई कमजोर पारिँदैछ ।
७. नाकाबन्दीलाई हामीले नाकाबन्दी भन्न सकेनौं । राष्ट्रियताको सवालमा हामीलाई भारत परस्त बनाइयो । जब कि हामी न भारतपरस्त हौँ न चीनपरस्त हौँ हामी नेपाल परस्त हौं ।
मेरो विषयमा कुरा गर्दा म आफ्नै कारणले हारेको हो । आफू हारेकोमा मलाई केही चिन्ता छैन । मेरो चिन्ता पार्टी हारेकोमा छ । मेरो चिन्ता निरुत्साहित कार्यकर्तालाई कसरी उत्साह भर्ने भन्नेमा छ । म एक्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँ, जो ६७५ मतले हारेको छु, तर प्रदेशसभाका दुवै उम्मेद्वारहरुलाई क्रमश २२ सय र ३२ सय भन्दा बढी मतले जिताएको छु ।
२. पदाधिकारीहरु थपेर समस्या समाधान गर्ने सोच राखिएको छ भने त्यो कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिदैन । अनि टालटुले नितिले पनि समस्या समाधान हुँदैन ।
सभापतिज्यू, यसभन्दा अगाडिका सभापतिहरु–सुशील कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला र किसुनजीले पनि प्रायः आफु निकटकालाई जिम्मेवारी र अवसर दिनुहुन्थ्यो । त्यसका लागि एउटा मापदण्ड थियो । त्यो के भने– कम्तीमा काग्रेंस हुनुपर्थ्यो। तर अहिले तपाईँको पालामा अवसर लिन कांग्रेस नभए पनि हुने रहेछ । केवल गूट र व्यक्ति निकट भए हुने रहेछ भन्ने कुरा दुरदराजका कार्याकर्ता माझ फैलिएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?